OPPO A11k – Bigger Storage, Better Performance | OPPO Myanmar
13MP ကျောဘက်ကင်မရာ ၂ လုံး
ကြီးမားသော 4230mAh ဘက်ထရီ
15.79cm (6.22'') HD+ ရေစက်ပုံစံမျက်နှာပြင်
15.79cm (6.22'') ရေစက်ပုံစံမျက်နှာပြင် |
3D တောက်ပစီးဆင်းနေသော ပုံစံဒီဇိုင်း | လက်ဗွေဖြင့် လော့ခ်ဖွင့်စနစ်
15.79cm ရှိ ကျယ်ပြန့်သည့် မျက်နှာပြင်က ဗီဒီယိုစီးရီးတွဲများကို ဆက်တိုက် ကြည့်ရှုသည်ဖြစ်စေ၊ ဂိမ်းကစားသည်ဖြစ်စေ မြင်ကွင်းအစုံကို နစ်ဝင်ဖမ်းစားနိုင်အောင် စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင် OPPO A11k သည် ဖုန်းတနေကုန်အသုံးပြုခြင်းကြောင့် သင့်မျက်ဝန်းထိခိုက်ခြင်းကို မဖြစ်ပါ်စေအောင် မျက်စိထိခိုက်စေနိုင်သည့် အပြာရောင်အလင်းတန်းများကို စစ်ထုတ်ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါသည်။
OPPO A11k ၏ ဖုန်းအနောက်ဖက်တွင် တပ်ဆင်ထားသော လက်ဗွေအာရုံခံစနစ် သို့မဟုတ် AI နည်းပညာသုံးမျက်နှာဖြင့် လော့ခ်ဖွင့်သည့်စနစ်တို့ဖြင့် သင့်ဖုန်းကို အလွယ်တကူ လော့ခ်ဖွင့်နိုင်ပါပြီ။ OPPO တွင် အသုံးပြုထားသော ဉာဏ်ရည်တုဖြင့် မျက်နှာပုံရိပ်အား ဖမ်းယူမှတ်သားနိုင်သည့် အဆင့်မြင့် နည်းပညာကို 128 ဘိုင်အိုမက်ထရစ်ပွိုင့်များအပေါ်တွင် အခြေခံ၍ ထုတ်လုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် လက်ဖျားလေးဖြင့်ထိတို့ရုံ သို့မဟုတ် အကြည့်တချက်ဖြင့်ပင် အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
OPPO A11k တွင် လမ်းလျှောက်စဉ် ဖုန်းအသုံးပြုခြင်းအတွက် အဆင်ပြေနိုင်မည့် ဒီဇိုင်းပုံစံနှင့် ချောမွေ့ပြေပြစ်လှပတင့်တယ်သော အခုံးပုံစံဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားပါသည်။ လက်တစ်ဖက်တည်းဖြင့် လွယ်ကူစွာ အသုံးပြုနိုင်သည့် မျက်နှာပြင်အရွယ်အစားဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
သင့်ဘဝထဲသို့ ချဉ်းနင်းဝင်ရောက်လာမည့် တောက်ပမှုတစ်ခု
အမဲရောင်ဒီဇိုင်းက စမတ်ဖုန်းပေါ်တွင် ဖြတ်သန်းစီးဆင်းနေသော ရေစီးကြောင်းပေါ်သို့ ဖြာကျသည့် အလင်းတန်းအသွင်ကို ရရှိအောင် အလှပဆုံး ပုံဖော်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ မတူသောရှုထောင့်တိုင်းအတွက် ကွဲပြားခြားနားသည့် အရောင်နှင့် အလင်းအတန်းများကို မှော်ဆန်ဆန်ရှုမြင်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
15.79cm(6.22'') မျက်စိထိခိုက်ခြင်းမှကာကွယ်ပေးသည့် ရေစက်ပုံစံမျက်နှာပြင်
အပြာရောင် အလင်းတန်းများကို ကာကွယ်ပေးခြင်း
AI နည်းပညာသုံး မျက်နှာဖြင့်လောခ်ဖွင့်သည့် စနစ်
ပါးလွှာသည့် အခုံးပုံစံ ဖုန်းကိုယ်ထည်
အလင်းရောင်တန်းများ စီးဆင်းသည့် 3D အသွင်ဒီဇိုင်း
Octa-core Processor | 4230mAh ဘက်ထရီ | ColorOS 6.1 | Dirac
12 nm-class octa-core processor ကို တပ်ဆင်ထားသည့်အတွက် OPPO A11k ဖြင့် ဂိမ်းကစားခြင်း၊ ဗီဒီယိုကြည့်ရှုခြင်းတို့တွင် ပြေပြစ်ညက်ညောသော အတွေ့အကြုံကို ရရှိစေမည်ဖြစ်ပါသည်။
အထိ 2GB RAM
အထိ 32GB ROM
အထိ processor နှုန်း 2.3GHz
တစ်နေကုန်လုံးအတွက် လုံလောက်သော အားပမာဏ
4230mAh ဘက်ထရီ ပါဝင်သည့်အတွက် HD ဗီဒီယိုများအား အွန်လိုင်းမှတဆင့် ၁၇ နာရီ ကြာကြည့်ရှုနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး ဂိမ်းကစားခြင်းအတွက် ၈ နာရီ ကြာရှည်ခံမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဘက်ထရီကုန်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရသော စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းအားလုံးကို လက်ပြနှုတ်ဆက်လိုက်ပါ။
ကားမောင်းစဉ် ထားရှိသည့် Mode
ကားမောင်းစဉ်ထားရှိသည့် Riding Mode သည် အရေးမကြီးသည့် ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများနှင့် အသိပေးချက်များအား ဘလော့ထားပေးနိုင်သည့်အတွက် သင့်အနေဖြင့် ခရီးစဉ်အပေါ်တွင် အပြည့်အဝအာရုံစိုက်နိုင်ပြီး ဘေးကင်းလုံခြုံမှု ရရှိစေပါသည်။
Smart Assistant သည် သင်အနှစ်သက်ဆုံးဖြစ်မည့် app များအား မျက်နှာပြင် screen ပေါ်တွင်
ထားရှိပေးနိုင်ပါသည်။ ပြက္ခဒိန်ကြည့်ခြင်း၊ အားကစားသတင်းများ မပြတ်စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် ကျန်းမားရေးအခြေအနေအား စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း စသည့်လုပ်ဆောင်ချက်များကို တနေရာတည်းတွင် လုပ်ဆောင်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
ဖိုင်များရယူခြင်း၊ Screenshot ရိုက်ခြင်းနှင့် အခြား သုံးလက်စ app များကို ဝင်ရောက်ခြင်း စသည်တို့ကို အလွယ်တကူ လုပ်ဆောင်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
Dirac သည် ဂိမ်းကစားခြင်း၊ သီးချင်းနားဆင်ခြင်း သို့မဟုတ် ဗီဒီယိုကြည့်ခြင်း စသည့် လုပ်ဆောင်မှုအပေါ် အခြေခံကာ အသံအရည်အသွေးကို အလိုအလျောက် ချိန်ညှိပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။ နားသောတဆင်သမျှ အသံအားလုံးကို လက်တွေ့ဘဝထဲသို့ နစ်ဝင်ရောက်ရှိသွားအောင် ဆွဲဆောင်ပေးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
AI နည်းပညာပါဝင်သည့် ကျောဘက်ကင်မရာ ၂ လုံး |
အလှဓါတ်ပုံရိုက်ကူးရာတွင် ဓါတ်ပုံရိုက်သူအား ပိုမိုထင်ရှားစေခြင်း | AI နည်းပညာသုံး အလှပြုပြင်ခြင်း
AI နည်းပညာပါဝင်သည့် ကျောဘက်ကင်မရာ ၂ လုံး
OPPO A11k ၏13MP ရှိ ပင်မမှန်ဘီလူးက ပုံရိပ်များကို အသေးစိပ်ကျကျ၊ ကြွကြွရွရွနှင့် ထင်ထင်ရှားရှားဖြစ်အောင် ဖမ်းယူရိုက်ကူးပေးပါသည်။ 2MP မှန်ဘီလူးမှ သင့်အလှဓါတ်ပုံကို ပညာရှင်တစ်ဦးရိုက်ကူးထားသည့် ပုံစံရရှိစေရန် စက်ပစ္စည်းပိုင်းဆိုင်ရာအဆင့်တွင်ပင် ဓါတ်ပုံရိုက်ကူးသူ၏ ပုံရိပ်ကို ပိုမိုထင်ရှားပေါ်လွင်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်စွမ်းရှိပါသည်။
AI နည်းပညာသုံး အလှပြင်ဆင်ပေးသည့် ရှေ့ကင်မရာ
OPPO A11k တွင် AI နည်းပညာကို အသုံးပြု၍ အသားအရည်အရောင်၊ အသက်နှင့် ကျား/မ စသည်တို့ကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ပေးကာ တစ်ဦးချင်းစီအတွက် အထူးခြား အတောက်ပဆုံးဖြစ်အောင်၊ သဘာဝကျကျလှပမှုရှိအောင် ပြင်ဆင်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
အားလုံး၏ အမြင်များအား ဖမ်းစားနိုင်မည့်
အလှဓါတ်ပုံရိုက်ကူးရာတွင် ဓါတ်ပုံရိုက်သူအား ပိုမိုထင်ရှားစေခြင်း
OPPO A11k ၏ အလှဓါတ်ပုံရိုက်ကူးခြင်း Portrait Mode တွင် ရိုက်ကူးသူ၏ ပုံရိပ်ကို ပေါ်လွင်ထင်ရှားမှုရှိစေရန် သဘာဝကျကျဖြင့် လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်သောကြောင့် မည်သည့်နောက်ခံရှုခင်းတွင်မဆို ကြည်ရှုသူအားလုံး၏ အမြင်ကို ဆွဲဆောင်နိုင်စေမည်ဖြစ်ပါသည်။
OPPO ၏ စံညွှန်း
သင့်အတွက် အမြဲအဆင်သင့်ဖြစ်နေမည့် ဝန်ဆောင်မှု
OPPO ၏ ထောက်ပံ့ပေးမှု
ဖုန်းဝယ်ယူအသုံးပြုသူများအားလုံးသည် ကျွန်တော်တို့၏ မိတ်ဆွေများဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် သင့်လိုအပ်ချက်များကို အကောင်းဆုံးဖြည့်ဆည်းနိုင်ရန် မည်သူမျှမယှဉ်နိုင်သော ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် သင့်အတွက် အမြဲအသင့်ရှိနေမည်ဖြစ်ပါသည်။
ပြင်းထန် တင်းကြပ်သည့် စမ်းသပ်မှုပေါင်းများစွာ
အချိန်ယူစစ်ဆေးမှုများစွာကို အောင်မြင်သည့် အရည်အသွေးမြင့် စိတ်ချရသည့် ကုန်ပစ္စည်းများစွာကို ဂုဏ်ယူစွာဖြင့် ထုတ်လုပ်ရောင်းချလျက်ရှိပါသည်။ OPPO A11k သည် တင်းကြပ်သည့် စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုပေါင်းမြောက်များစွာ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးဖြစ်သဖြင့် ကုန်ပစ္စည်း၏ အရည်အသွေးကို အသုံးပြုသူများအနေဖြင့် အပြည့်အဝ ယုံကြည်စိတ်ချနိုင်ပါသည်။
10000 နားကြပ်ထိုးသွင်း စမ်းသပ်ခြင်း
10000 USB ပေါက်ထိုးသွင်း စမ်းသပ်ခြင်း
28000 10cm အမြင့်မှ ပစ်ချ စမ်းသပ်ခြင်း
100000 အသံခလုတ် စမ်းသပ်ခြင်း
200000 ပါဝါခလုတ် စမ်းသပ်ခြင်း
4.	OPPO A11k’s thickness of 8.3mm and weight of 165g are approximate values taken from OPPO internal tests. The actual product may vary.
5.	OPPO A11k supports 17 hours of online video streaming and 8 hours of online gaming, as determined by OPPO internal testing. Actual playback time and usage time may vary under different conditions.